XAMPP (Apache Friends) for Windows — MYSTERY ZILLION
XAMPP (Apache Friends) for Windows
December 2007 edited April 2011 in PHP
I just want to introduce XAMPP (Apache Friends) for Windows in this topic. I think you guys are Learning and Developing PHP on Windows with Apache. So I best thing is that XAMPP because this pack includes the followings:
* Apache HTTPD 2.2.6 + Openssl 0.9.8g
* MySQL 5.0.51
* PHP 5.2.5
* phpMyAdmin 2.11.3
* FileZilla FTP Server 0.9.24
* Mercury Mail Transport System 4.52
For example, if you want to use advanced php function like imagecreatetruecolor( ), you need to have GD 2.0.1 or later.
With XAMPP, you don't need to worry about the platforms, functions and compatibility issues, you can use most LAMP features on windows but not all. I am afraid.
You can learn and download from the following link:
ygnkk wrote: »
Thanks for your knowledge sharing , much appreciate it.
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အခု Wamp သုံးနေတာပါ။ XAMPPကိုသုံးကြည့်လိုက်အုံးမယ်။:103:
Xampp က Wamp ထက်ပိုမြန်သလိုပဲ..
xampp က မေးဆာဖာပါရတယ် ftp ဆာဖာလဲရတယ် အဲ့ဒီတော့ hosting ကို စမ်းချင်ရင်တော့ အဲ့ ဒီဆာဖစ်တွေနဲ့ စမ်းလို့ ရပါတယ်။ အဲ့တော့ အတော့ကောင်းတဲ့ ဆာဖာစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
XAMPP က ကြာရင် စက်လေးလာပါတယ် ... WAMP နဲ့ ယှဉ်သုံးရင် WAMP က ပိုပေါ့ပါတယ် ... ရိုးရိုး apache, MySQL နဲ့ php လောက်ပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ WAMP သုံးတာ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ ... XAMPP ကို စက်မှာ တစ်လလောက်သုံးတယ် ... ဆိုက်ကလည်း အခု ၂၀ လောက်ဖြစ်လာတော့ လေးလာတယ်ဗျ ... WAMP မှာတော့ ဆိုက်တက်တာကြာတယ် ... ဒါပေမယ့် အခု ၂၀ လောက်သုံးလဲ စက်မလေးသွားပါဘူးဗျာ ...
ကျွန်တော်လည်း php ကိုကွန်ပျူတာမှာ ရမ်းချင်တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...
အရင်ဆုံး အောက်က XAMPP Windows 1.6.5 လေးကိုဒေါင်းပြီး ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျူတိုရီရယ်သဘောလေး ရှင်းပြပေးပါဦးဗျာ...
donut wrote: »
အရင်ဆုံး XAMPP ကို run လိုက်ပါခင်ဗျ။ သူ့အထဲမှာ php ပါပြီးသား။ php ကိုသပ်သပ် run စရာမလိုတော့ဘူး။ XAMPP ကို run ပြီးရင် Internet explore မှာ http://localhost လို့ရိုက်ကြည့်ပါ။
Welcome to XAMPP for Windows Version x x ဆိုပြီးတက်လာပါမယ်။ ဒါဆိုရင် server ကအလုပ်လုပ် ပါပြီ။ အခုဆိုရင် php လေ့ကျင့်ခန်း လေးတွေ စရေးပြီး run လို့ရပါပြီ။ Notepad မှာဖြစ်ဖြစ် ၊ Dreamweaver မှာဖြစ်ဖြစ် ရေးပါ။ Dreamweaver မှာတော့ ရေးလို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ php လေ့ကျင့်ခန်း တွေကိုတော့ ကိုစေတန် ၊ ကို ပီဇီ ၊ကိုခွန် တို့ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်:D။ အဲဒီမှာကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ သင်ခန်းစာတွေပဲ လုပ်တာပါ။
အဲ ရေးပြီးရင်တော့ .php နဲ့ C:\_Program Files\_xampp\_htdocs မှာ save ပါ။
So thz mgsun!.
I have already done cuz my computer was confused with so many "localhost" -- this is my fault I run so many local host supported programs :P -- Fastwork and also IIS was. Later I dismissed them only run with XAMMP now localhost is activated! :65: :65: :65:
BTW, thank you so much bro Mgsun.
.htaccess အကြောင် ဃဃဏဏ သိချင်ပါတယ်ဗျာ ကူညီပေးကြပါဥိး RewriteEngine ဘာလို့ ဒါရေးတာလဲ ဒါရေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းပြောပြပြီး လေ့လာကိုးကားဖို့ရာနေရာလေးတွေမျှဝေပေးကြပါဥိးဗျာ
XAMPP is only good if you are testing on your local server but if you want to host your own website,it better not to use XAMPP
The browser could not find localhost after reinstalling xampp , although it's OK before . What will be the problem?
Now , I use wamp . I want to use xampp again, where can I check for problem?
Wamp ရော Xampp ရော တစ်ပြိုင်နက်တည်း Run လို့မရပါဘူး..ဘာလို့ဆို နှစ်ခုလုံးက localhost : 80 နဲ့ထွက်နေလို့ပါ နှစ်ခုလုံးတော့ အင်စတောလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်..သုံးရင်တော့ တစ်ခုချင်းသုံးရပါတယ် တကယ်လို့ နှစ်ခုလုံး တစ်ပြိုင်တည်း သုံးချင်ရင်တော့ localhost port ကို change ပေးရပါမယ်..တစ်ခုကို 80 တစ်ခုကို 70 စသဖြင့်ပေါ့... xampp မှာချိန်းချင်ရင်တော့ xampp/apache/config အဲ့ထဲက httpd ဆိုတာရှိပါတယ် အဲ့ကောင်ကို text editor တစ်ခုခုနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင်
default 80 ပါ ဒါက 70 ကို ကျွန်တော်ချိန်းထားလို့ပါ.ပြီးရင် အောက်နားထပ်ဆင်းလိုက်ပါဦး အဲ့မှာ ထပ်တွေ့ပါမယ်..
အဲ့ဒါကိုလည်း 70 ထပ်ချိန်းပါ ပြီးရင်တော့ ရပါဘီ လိုကယ်ဟို့စ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့.. localhost:70 အဲ့လိုခေါ်ပါ.. phpmyadmin ခေါ်ချင်ရင်တော့ localhost:70/phpmyadmin အဲ့သလိုဆို ဆာဗာ နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်း Run လို့ရပါပြီ အဆင်ပြေပါစေ....
နောက်တစ်ခုသိချင်တာက xampp မှာ php files, folders တွေကို စက်ရဲ့ system (eg. C:// ... ) အောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားနေရာမှာ သွားသိမ်းလို့ရနိုင်သလား ၊ ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရောရှိပါသလားခင်ဗျာ (တကယ်လို့ window ကျသွားရင် ကုန်ရော.. ) ဆိုတော့ .. back up ပဲ လုပ်ထားရမှာလား ...
.... thanks & regards ...
akh.infotech wrote: »
ဘယ်နားထားထား ထားလို့ရပါတယ်။ xampp folder တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာမှာ ကူးထားလိုက်ပါ Service တွေကို Run ရင်တော့ အဲဒီ့ကိုယ်ထားတဲ့ နေရာကနေ xampp-control နဲ့ Start လုပ်ပေါ့ Portable ဖြစ်နေချင်ရင်တော့ Service အဖြစ် Install မလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်သုံးချင်မှသာ xampp-control ကနေ Start လုပ်ပြီးပဲသုံးပါ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်ကူးချင်တဲ့နေရာ ကူးယူသွားလို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။